यसरी मिले रबि लामिछाने र धुर्मुस! के अब बन्ला त गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हाम्रो देशमा ? (बिशेस लाइव भिडियो) हेर्नूहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
यसरी मिले रबि लामिछाने र धुर्मुस! के अब बन्ला त गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हाम्रो देशमा ? (बिशेस लाइव भिडियो) हेर्नूहोस
यस बिशेष अभियान टोलीमा धुर्मस मात्र छैनन् पत्रकार रबि लामिछाने पनि जोडिन आइ पुगेका छन् । पोखराको रंगशाला र भरतपोखरी लगायतका ठाउँहरुमा टोलीले जग्गा हेरीसकेको छ । अब सबै ठाउँको जग्गालाई मध्यनजर गरी र क्रिकेटको मापदण्ड, यातायात, बिमास्थल लगायतको कुराहरुलाई लिएर छिटै स्थान छनौट गर्ने धुर्मुसले बताएका छन् । आजको बिशेष लाइव भिडियो मार्फत सिताराम कट्टेल र रबि लामिछाने यस अभियान सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिदै।
गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेशनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिईरहेको छ । नेपालमा एउटा पनि अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नभएको र क्रिकेटको बिकाश गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले देशका बिभिन्न ठाउँमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागी जग्गा हेरिरहेका छन् । चितवन, भैरहवा, काठ्माण्डौं, हेटौंडा लगायका ठाउँमा जग्गा हेरेपछि उनिहरु शनिबार पोखरा आएका हुन् ।
खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्माले काठमाण्डौंमा रंगशाला सरकारले बनाउने र पोखरामा बनाउन सल्लाह दिएसंगै टोली पोखरा आएको हो । यस बिशेष अभियान टोलीमा धुर्मस मात्र छैनन् पत्रकार रबि लामिछाने पनि जोडिन आइ पुगेका छन् । पोखराको रंगशाला र भरतपोखरी लगायतका ठाउँहरुमा टोलीले जग्गा हेरीसकेको छ । अब सबै ठाउँको जग्गालाई मध्यनजर गरी र क्रिकेटको मापदण्ड, यातायात, बिमास्थल लगायतको कुराहरुलाई लिएर छिटै स्थान छनौट गर्ने धुर्मुसले बताएका छन् । आजको बिशेष लाइव भिडियो मार्फत सिताराम कट्टेल र रबि लामिछाने यस अभियान सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिदै यसो भने हेरौ यो भिडियो |
Prevनेपालका चर्चित नायक राजेश हमालले दिल्ली पुगेर गरे नेपालीलार्इ चकित पार्ने यस्तो काम ! पूरा हेर्नुहोस ।
Nextआजै जेलबाट सलमान खान यसकारण छुट्ने
कृष्ण ओलीको आज जन्मदीन, जीवन संगीनी रुपाले लेखिन यस्तो मनछुने स्टाटस…हेर्नुहोस
डलरको भाउ बढ्यो ! साउदी, कतार, दुबई मलेसिया लगायतक मुद्राको पनि भाउ बढ्यो …..